सबैले आत्मसात गर्ने संविधान--indigenousvoice
विहिवार १७ पौष, २०७१ | समाज तथा संस्किृति
डा. मदन परियार
मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिले सबैलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । साझा अवधारणा आउने आशामा नयाँ–नयाँ किसिमका अवधारणा ल्याएर, विभिन्न सवाल उठाएर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । जुन ज्यादै दुःखको कुरा हो । यसबेला हामी संयमता पूर्वक सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्छ । तर, यो ज्यादै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । विभिन्न समूह, क्षेत्र तथा सम्प्रदायले राज्य पुनर्संरचनाका विभिन्न अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन् । त्यसले जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले एक किसिमले उदार र सबैलाई समेट्ने रणनीति ल्याई राज्य पुनर्संरचनालाई सार्थक तुल्याउनु पर्छ । जसले राज्य पुनर्संरचनालाई ठोस रुप दिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर छलफल गरेका थियौं । फेरि पनि कहीं न कहीं छलफल गर्र्नै पर्छ । छलफलका क्रममा जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको नामाकरण गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर ठूलो विवाद भएको थियो । जातीय आधारमा नामाकरण गर्दा जातीय अग्राधिकारको सवाल झनै पेचिलो बनेको थियो । जुन जातिको नाममा नामाकरण गरिन्छ, त्यही जाति वा समुदायले कम्तीमा दुई कार्यकाल सरकार प्रमुख हुने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हामीले छलफलपछि हटायौं । त्यसपछि नामको कुरामा सांस्कृतिक, जातीय मान्यता दिने बाहेक अन्य कुरा देखिँदैन । तर, जातीय नाम दिने बित्तिकै अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् । अन्य जातिले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु पर्ने हुन्छ वा साम्प्रदायिक सद्भाव खलवल हुन्छ । साम्प्रदायिक दंगा हुन सक्छ । राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्न सक्छ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । जस्तो देख्यो त्यस्तै नतिजा पनि आउन सक्छ । प्रमुख कुरा हामीले सबै किसिमको संकीर्णता हटाउनु पर्छ ।
जातीय नाम नराखी नै एक मत हुन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नु हुँदैन । तर, जे भएपनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर राष्ट्रिय अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सहिष्णुताजस्ता कुरालाई अक्षुण राख्दै साझा सिद्धान्त र अवधारणामा एक जुट हुन जरुरी छ । अन्यथा भविष्यमा संकट आउने देखिन्छ । अहिले एकअर्कामा शंका–उपशंका छ । यो रहनु हुँदैन । किनभने, कुनै एउटा जातिको नाममा राज्य बन्यो भने अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् वा अपहेलित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको शंका उपशंका छ । त्यस शंका उपशंकालाई हटाउन यो पहिचान मात्र दिएको हो । त्यहाँ सबैले समान अवसर पाउँछ । कुनै किसिमको भिन्नता हुँदैन भन्ने सबै लाई बुझाउन महत्वपूर्ण छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । नामलाई नै ठूलो मुद्दा बनाइरहनु पर्दैन । मुख्य कुरा सिद्धान्त हो । जसले सबैलाई समान अवसर देओस् । हिजोसम्म उत्पीडन, उपेक्षा र अपहेलनामा परेका समुदाय तथा जातिहरू थिए वा कुनैको वर्चस्व थियो भन्ने कुरा नहुने किसिमको स्थिति सिर्जना गरी साझा नाममा जाँदा पनि नोक्सान हुँदैन । कुनै एउटा जातिको नाममा राज्य बन्यो भने अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् वा अपहेलित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको शंका उपशंका छ । त्यस शंका उपशंकालाई हटाउन यो पहिचान मात्र दिएको हो । त्यहाँ सबैले समान अवसर पाउँछ । कुनै किसिमको भिन्नता हुँदैन भन्ने सबै लाई बुझाउन महत्वपूर्ण छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । नामलाई नै ठूलो मुद्दा बनाइरहनु पर्दैन । मुख्य कुरा सिद्धान्त हो । जसले सबैलाई समान अवसर देओस् । हिजोसम्म उत्पीडन, उपेक्षा र अपहेलनामा परेका समुदाय तथा जातिहरू थिए वा कुनैको वर्चस्व थियो भन्ने कुरा नहुने किसिमको स्थिति सिर्जना गरी साझा नाममा जाँदा पनि नोक्सान हुँदैन ।
भोटिङ या अन्य माध्यमबाट कुनै एकको आवाजलाई दवाउन सक्छन् भने त्यो पनि सुखद् स्थिति होइन । किनकि, त्यसको तुष रहिरहन्छ । र, कुनै किसिमले त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ । जुन यो देश र राष्ट्रको अखण्डताका लागि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले यो स्थितिलाई जुनसुकै हालतमा पनि हटाउन सक्नुपर्छ । र, हरेकले आफ्नो कुरा मात्र कुरा राख्ने सोंच हटाएर मध्यममार्गबाट समाधान खोज्नुपर्छ । अखण्डवाला आन्दोलन देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भन्नेहरूको दृष्टिकोणमा त्यो सही नै होला । तर, त्यहाँ पनि फरक–फरक विचार र अवधारणा आइरहेका छन् । थारुहरूले कञ्चनपुर–कैलालीलाई थरुहट नै हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यस्तै सेती–महाकालीकाले छुट्टै अवधारणा पनि ल्याएका छन् । यी सबै कुराले यस्तै हुनुपर्छ भनेर अडिग भएर बस्नुभन्दा सबैले स्वीकार्ने किसिमले संघीयताको संरचना गर्न सकिन्छ । खुला दिमागले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अखण्ड सुदूरपश्चिममा त्यहाँका सबै समुदाय मिलेको भन्ने कुरा आयो । तर, बाहुन, क्षेत्री, दशनामी समाजसँग दलित जागरण समाज भन्ने संस्था रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफूलाई आदिवासीको सूचीमा राख्नुपर्ने र जातीय राज्य हुुनुहुँदैन भन्दै आएका छन् । तर, सम्पूर्ण दलित समुदायले बाहुन, क्षेत्रीलगायतको आन्दोलन मानेको होइन । त्यहाँ निश्चित क्षेत्रका केही दलितले मात्र सहयोग गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा दलितहरू संघीयताका विरोधी होइनन् । आयोगको प्रतिवेदनमा दलितका लागि गैरभौगोलिक स्वायत्त प्रदेश दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । यस अवधारणमा उनीहरूलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । यो अवधारणा सार्थक हुने हो भने दलितलाई छोटो समयमानै सबैभन्दा पछाडि परेको समुदायबाट अरु समुदायसरह पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यद्यपि, दलितलाई समेट्न नश्लीय (आर्यनश्ल) कुरा उठेको हो । तर, त्यो सार्थक छैन । किनभने त्यही नश्लले गर्दा खेरी नै दलितहरूले शताब्दीयौं वर्षसम्म प्रताडन, उपेक्षा र भेदभावपूर्ण व्यवहार व्यहोर्दै आएका हुन् । यो नश्लीय कुराले नै एक हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य भई समान समाजको सिर्जना हुनेमा दलितहरू निश्चितरुपमा एक हुन्छन् । दलितलाई समेट्न नश्लीय (आर्यनश्ल) कुरा उठेको हो । तर, त्यो सार्थक छैन । किनभने त्यही नश्लले गर्दा खेरी नै दलितहरूले शताब्दीयौं वर्षसम्म प्रताडन, उपेक्षा र भेदभावपूर्ण व्यवहार व्यहोर्दै आएका हुन् । यो नश्लीय कुराले नै एक हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य भई समान समाजको सिर्जना हुनेमा दलितहरू निश्चितरुपमा एक हुन्छन् ।
अहिलेको स्थिति स्वभाविक प्रक्रिया हो । किनभने, बाहुन, क्षेत्रीलगायतले पनि अधिकार दिन्नौं भनेका छैनन् । समान किसिमको व्यवहार हुन्छ कि हु ँदैन ? आफूमाथि रिस फेर्ने किसिमको अवस्था पो हुने हो कि ? भन्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको सरोकार हामी नै माथि भइरहँु र अन्य समुदायलाई दवाएर राखि राखुँ भन्ने होइन । उनीहरूमा अहिलेको संरचनाले पछि हामीलाई नै पछाडि पारेर उल्टो अवस्था आउला कि भन्ने त्रास छ । त्यसैले अहिले आएका संघीयताका अवधारणाले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान राख्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसमा स्वभाविकरुपले अहिलेसम्म पछाडि परेका समुदायलाई विशेष अवसर दिएर सबैलाई एकै बनाउने कुरा प्रमुख हो । कसैलाई बञ्चित गर्ने कोसिस गरिएको होइन । त्यसैले एकार्कामा विश्वास कायम गर्नुपर्छ । नत्र सामाजिक सद्भावलगायतका सामाजिक अन्तरघुलनका कुरा हुन सक्दैन । वर्त मान अवस्थामा हामी गम्भीर र चुनौतिपूर्ण समयमा गुज्रि रहेका छौं । त्यसैले संयमपूर्वक, सोंचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
दोलखाकी लक्ष्मी तामाङ बनिन् मिस तामाङ २०१५
सोमबार १९ माघ, २०७१ | समाज तथा संस्किृति | प्रकाशक: इन्डिजिनियस भ्वाईस